60 Mawduucyo Aad Uqurux Badan Oo Nadiifiya Tumblr | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Dulucda
Haddii aad raadineyso Mawduucyada Tumblr, halkan waxaad ka heli doontaa xulasho la yaab leh oo mawduucyo ah oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka kuu oggolaanaya inaad si buuxda u qaabeyso bartaada boggan.
Waxaa ka mid ah beddelka ugu badan ee lagula taliyay in lagu galo microblogging laga yaabee Tumblr inuu yahay kan ugu caansan uguna caansan. Sida WordPress ama Blogger waxay na siisaa qalab badan oo aan ku abuuri karno kuna horumarin karno waxyaabaha ku jira qadka toosan, si kastaba ha noqotee haddii ay jiraan wax ka soocaya barnaamijkan inta ka hartay waa dareen bilicdeeda. On Tumblr sawirka ayaa ka adkaaday nuxurka qoraalka markaa kuwani waxay helayaan kaalin aasaasi ah markay qeexayaan boggeena waxayna ka dhigayaan xulasho aad u guuleysata in la abuuro jagooyin, tusaale ahaan. Dabeecaddeeda dareenka leh iyo tas-hiilaadka ay na siiso si aan u qaabeyno oo u dhisno boggeena ayaa ka dhigaya mid ka mid ah xulashooyinka ugu badan ee ay adeegsadaan naqshadayaasha iyo naqshadeeyayaasha garaafka.
Heerka nashqadeynta, waxay na siisaa a badal badan iyo arrimo kor u qaadaya qaybta balooggeena. Xaqiiqdii, waxaa jira noocyadan sheybaarada shabakadda oo leh xulashooyin habayn aad u kala duwan. Xulashooyinka ay bixiso Tumblr lafteeda waxaan kaheleynaa xalal looqeybiyay qeybaha soosocda: hal sadar, laba tiirar, shabaq, mowduucyo loo sameeyay gaar ahaan boggaga martigalin doona qaddar badan oo qoraal ah, heer hoose, kaladuwanaansho iyo xallin sare. Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno xulasho ka xiiso badan lixdan mawduucyo Tumblr oo bilaash ah in ay yihiin kuwo aad u xarrago leh oo bixiya bilic iyo xirfad dhameystir.
1 Mawduucyada Tumblr ilaa tiir
2 Mawduucyada Tumblr ee laba-geesoodka ah
3 Mawduucyada Grid Tumblr
4 Ku habboon martigelinta nuxurka qoraalka
5 Mawduucyada 'Minimalist tumblr'
6 Mawduucyada Tumblr ee Go'aanka Sare
7 30 mawduucyo Tumblr oo bilaash ah
Mawduucyada Tumblr ilaa tiir
Madaxa midab fidsan iyo cinwaan caan ah. Ku habboon in la isticmaalo xalalka midab-kala-sooca sare. Midig dhinac bidix, sagxad fidsan oo isku dhafan astaamaha bulsheed ee kala duwan ee qoraaga.
Tusaale naqshadeynta maaddada oo leh is-dhexgal aad u firfircoon oo fudud. Waxyaabaha sabeeya iyo dhammaystirka ugu yar ee bixiya hawo qabow. Waxay ka kooban tahay liis dhinaceed si cadaalad ah loo dhimay oo u oggolaan doonta akhristayaashaada inay si deg deg ah oo deg deg ah u socdaan bartaada.
Liiska ugu sareeya oo si otomaatig ah u qarsoon ayaa na siiya suurtagalnimada inaan soo bandhigno markii aan gujino badhanka. Cinwaan go'an marka la rogrogayo iyo guud ahaan xalka aadka u yar ee muhiimadda weyn siinaya nuxurka qoraalka.
Interface Classic. Qaab dhismeedkeedu wuxuu raacaa xariiqa iskuulka hore. Kuma jiraan nooc walxaha sabeynta ama madax go'an markii la rogrogayo. Adiga ayaa adiga kuugu habboon haddii aad raadineyso xal caadi ah, oo cad oo fudud.
Ka saar weyn
Aad ugu eg qaab dhismeedka Oslo na siiso. Muuqaal heer sare ah oo aad u macquul ah inkasta oo ay ku jiraan menu sare oo aan sidoo kale go'anayn. Waa hagaagsan tahay haddii ujeedkeenu yahay inaan abuurno baloog caadi ah oo aan u faafino macluumaadka si fudud oo cad.
Loogu talagalay fanaaniinta iyo xirfadlayaasha jawiga hal abuurka. Dhammaystir dhammaystiran oo dhammaystiran oo leh liistada bidix ee sabaynaysa, kala-guuryo fudud iyo walxo fidsan.
Mawduucyada Tumblr ee laba-geesoodka ah
Fudud iyo sidoo kale xarrago. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaabeeysid cunsur kasta marka la eego midabka oo aad u dejiso sawirada qaabka laba tiir. Ku habboon iswaafajinta qoraalka isla heerka macluumaadka ee qaabka sawirada.
Waa xal aad u muuqda oo hawo farshaxanimo leh oo qaab dhismeedkeedu yahay menu dhinaca sabaynta iyo xalal aad u xoog badan oo hover ah oo loogu talagalay badhannada iyo walxaha qoraalka. Waxay ku habboon tahay dhammaan kuwa u heellan adduunka moodada ama ay ku soo jiitaan.
Waxay isku daraysaa ficil ahaan iyo qaab ahaanba xal aad u xiiso badan. Qaab dhismeedkiisa waxaa jira xitaa joogitaan u dhexeeya qoraallada iyo sawirrada. Waxay soo bandhigeysaa aag sare oo u shaqeeya sidii xarun sawir leh oo ku saabsan waxyaabaha ku jira iyo maqaallo muuqaal ah oo ka hooseeya menu fudud oo leh cinwaan si loogu daro lotogype of our site.
Template fudud oo aan caadi ahayn oo ku habboon meelaha leh hawo dhalinyaro iyo aan rasmi ahayn. Ku dul wareeji sawirada daboolka iyo badhanka qaab fidsan. Xiiso leh
Waxay soo bandhigeysaa qaab suxufinimo oo macquul ah. Qaab dhismeedkeedu waa mid aad u wacan maxaa yeelay waxaa jira aagag waaweyn oo faaruq ah oo akhriska nasanaya. Labadaba menu-keeda sare iyo dhinaca dhinaceeda labaduba waa kuwo go'an inkasta oo adeegsaduhu isbedelayo.
Shaki la'aan mid ka mid ah waxyaabaha aan jeclahay. Waxay soo bandhigeysaa menu dhinac ah oo lagu soo bandhigi karo badhanka. Waxyaabaha ku jira kiiskan ayaa si muuqata u muuqda oo taariikhda mid kasta oo ka mid ah maqaallada ayaa u muuqda qaab calaamadeysan (ku dhowaad ku dayashada bilicsanaanta sawirrada analog). Waxaa lagula taliyay abuureyaasha nuxurka noocuu doono ha noqdee.
Mawduucyada Grid Tumblr
Qaab-dhismeed aad u qurux badan laakiin leh nuunisyo aan rasmi ahayn oo bixiya joogitaan ballaadhan oo ku saabsan waxyaabaha garaafyada ah. Ku sii wad menu-ga sare iyo dhinac go'an oo go'an. Waxay u muuqataa mid miyir qab ah oo ay ku jiraan waxyaabo firfircoon sida cinwaanada.
Sii wad meeniska go'an iyo qaabdhismeedka oo bixiya amar weyn iyo akhrin la'aan adigoon adeegsan waxyaabo culus. Ku jihaysan abuuritaanka nuxur aan rasmi ahayn.
Meel si muuqata loogu talagalay in loogu sawiro macluumaadka garaafka iyo xubno firfircoon oo firfircoon. Waxay kuxirantahay kala guurista walxaha oo dhan waxayna xalinaysaa midabyo fidsan iyo muuqaal nadiif ah oo xirfad leh.
Grid ay ku jiraan tiro badan oo qoraallo iyo xubno muuqaal ah. Liis fudud oo fudud iyo is dhexgal saaxiibtinimo oo dhameystiran.
Template loogu talagalay faylalka shaqooyinka xirfadlayaasha sawirka. Liis gaabin ah oo diyaarsan si ay u martigeliyaan tiro badan oo sawirro ah oo iyagu naftooda u hadlaya.
Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah u leh, waa jawi loogu talagalay in lagu wadaago sawiradaada min daqiiqad eber oo ku taal bogga ugu weyn sida gallery iyo qosol caajis leh.
Ku habboon martigelinta nuxurka qoraalka
Intooda badani waxay leeyihiin qaabdhismeedyo aad u faahfaahsan oo u baneynaya meel labadaba waxyaabo garaaf ah qaab muuqaal ah iyo nuxur ahaan qaab maqaallo ama qoraal ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa loogu talagalay faafinta noocyada qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira, helitaanka xalal aad u qurux badan, aan rasmi ahayn ama xirfad-yaqaanno ah. Waxay ka dhex muuqdaan iyaga dhexdooda:
Fanka ayay tiri
Mawduucyada 'Minimalist tumblr'
In yar ayaa ka badan, taasina waa sababta Tumblr uusan u illoobin noocyada ugu yar ee loo yaqaan 'minimalism' si loo horumariyo qaabab qurxoon oo loogu talagalay horumarinta iyo faafinta waxyaabaha. Guud ahaan xalalkani waxay umuuqdaan kuwa aad u adag, xarrago iyo xirfadlayaal ah, oo caan ku ah abuureyaal badan oo bisil.
Mawduucyada Tumblr ee Go'aanka Sare
Qeybtaan gudaheeda waxaan ka heli karnaa xalalka shaashadda, hal ama labo tiir ama minimalist oo loogu talagalay xoogaa baahiyeyaal abuurayaal ah. Tayada soo-jeedimahan ayaa xoogaa ka sarreeya, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin soo jiidasho leh:
30 mawduucyo Tumblr oo bilaash ah
saratoosiyaha: Aad u fudud. Bidix bidix oo leh astaan, sharaxaad iyo menu. Midigta, dhammaan sawirada.
Line: Cinwaanka goobta iyo sharraxaadda oo xuddun u ah xagga sare. Qeybta hoose, sawirada. Lugood ahaan, menu.
Liberation: Marka laga soo tago cinwaanka iyo sharaxaadda, sidoo kale waxaad leedahay menu-ka oo ku yaal xagga sare.
Okatheme: dhinaca bidix ee bidix oo leh cinwaan, sharaxaad, menu iyo astaamo. Dhinaca midig, shaqadaada.
Laad (jawaab leh) Iyadoo la adeegsanayo mashiinka raadinta iyo astaamaha warbaahinta bulshada xagga sare lagu soo daray. Marka xigta, cinwaanka, sharaxaadda iyo liiska.
Observer (jawaab leh): shax loogu talagalay in muhiimad weyn la siiyo qoraalka.
Baro: sawirro leh qaab ballaaran oo cad, gadaal hal sawir.
tiir: khaanad keliya, sida baloog.
Hooska: oo leh dhinac bidix oo ah meesha menukeenu noqon doono iyo aag ballaaran oo ku yaal dhinaca midig halkaasoo waxyaabahayaga lagu soo bandhigi doono.
Alta: oo leh saddex sadar oo ay ku taal bartamaha.
fisqi: sawirro leh qaab cad iyo nooc bir ah.
Gloss: calaamadda iyo menu-ka aagga sare.
Deluxe: wax walba waxay umuuqdaan inay dul sababayaan shaashadeena.
Tone: aad u gaar ah, oo leh dhinaca dhinaca midig
Mowduuca Daqiiqad: Tilmaamo ku habboon blog-ga suugaanta
Maxaad u maleyneysaa xulitaankan 60 Mawduucyada Tumblr gabi ahaanba waa bilaash?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Dulucda » Mawduucyada Tumblr
Okatheme waa mawduuca saxda ah ee aan raadinayay, aad baad u mahadsantahay Lúa :)
Ku soo jawaab NESTicle
Dhib malahan! Waxaan ku faraxsanahay in boostada ay waxtar kuu laheyd.
Jawaab Lúa Louro
Waxba kama fahmin, waxaan dhigay magaca mowduucyada mana muuqdaan, caawimaad :(.
Jawaab Fernanda Gonzalez
Waxa ay tahay inaad nuqul ka sameysato waa HTML-ka oo ku dhaji halka aad ku saxeyso mowduuca. Ma aqaano halka aad dhigeyso magaca heesta laakiin waxaan u maleynayaa inaad ku wareertay. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad daawato casharrada, way ka fududdahay sidaad u malaynayso.